Wararka - Genius wuxuu isku daraa Shimano Di2 iyo SRAM qaybaha haydarooliga
Genius wuxuu isku daraa Shimano Di2 iyo SRAM qaybaha haydarooliga
Maxaad qabataa marka warshadaha baaskiilku aysan soo saari karin qaybo daboolaya baahiyahaaga gaarka ah? Haddii aad tahay injineer naqshadeysan oo khabiir ku ah pneumatic Paul Townsend, waxaad soo saari doontaa badeecooyinkaaga oo waxaad ka xadi doontaa qaybo ka mid ah noocyada tartamaya.
Bawlos wuxuu faallo ka bixiyay shaqada tikniyoolajiyadda waddo-dhamaadka (oo leh bareegyada hareeraha hareeraha) oo leh sawirkiisa khaaska ah ee SRAM-Shimano, waa inaan wax badan ka baranno.
Horaantii bilowgii 2016, suuqa kooxaha wadada wuxuu umuuqday mid aad uga duwan hada. Shimano wali ma uusan bilaabin Dura-Ace R9170 disc iyo qalabka loo yaqaan 'Di2 kit combo' (taxanaha aan caadiga aheyn ee R875 iyo bareegyada iswaafajiya ayaa ah xulashooyinka kaliya ee hawo-hidde / Di2), iyo SRAM Red eTap HRD wali bilo ayaa ka dhiman.
Bawlos wuxuu rabay inuu isticmaalo bareegyada hareeraha hareeraha ee baaskiilkiisa wadada, laakiin kuma uusan qanacsaneyn qallooca bareegga Magura.
Kabaalka SRAM oo leh bareeg birta hareeraha ayaa leh qiimo dhimis badan. Isagu waa taageere gear-ka Shimano Di2, sidaa darteed wuxuu go'aansaday inuu labadooda isugu daro mashup DIY gaar ah.
Tani waxay ku lug leedahay soo guurista leverka iyo iskuxirka batoonka wareejinta iyo qalabka elektaroonigga ah ee laxiriira astaamaha Di2 joysticks ee loo yaqaan 'SRAM hydraulic road joystick body'.
Nidaamka Haydarooliga ee SRAM wali isma beddelo, laakiin waxaa ku shaqeeya Shimano lever blades, iyo wareejinta qalabka gebi ahaanba waxay ku saleysan tahay Di2.
Waxaan weydiiyay Paul su'aalo qaar si aan wax badan uga barto qaab dhismeedkiisa aan caadiga ahayn: sida uu u shaqeeyo, sooyaalkiisa injineernimada, iyo waxa xiga. Jawaabta Bawlos waxaa loo tafatiray dherer iyo caddayn.
Kahor inta aynaan bilaabin, waa inaan tilmaannaa in wax ka beddelka nidaamkaaga bareegta si kasta oo ay tahay ay u keeni karto dhaawac halis ah, mana kugula talinayno inaad sidan sameyso. Wax ka beddelka qaybaha ayaa sidoo kale baabi'in doona dammaanadda soo-saaraha.
Tan iyo 1980-maadkii, waxaan fuuli jiray baaskiil markii aan ka baranayay Jaamacadda Coventry Poly University injineernimada. Waqtigaas waxaan haystay Topanga Sidewinder iyo baaskiil buurta Mick Ives.
Waxaan ka soo shaqeeyay soo saarista baaskiillada iyo dejinta caadooyinka, waxaanna muddo dheer ahaa injineer naqshadeynta iyo khabiir ku ah sambabada. Waxaan sidoo kale wax ka badalay gawaarida iyo baaskiillada sanado badan.
Waxaan haystay Canyon Ultimate sanadkii 2013 waligayna waan jeclaa tikniyoolajiyadda, marka hore waxaan ku qalabeeyay shirkadda Shimano Ultegra 6770 Di2 kooxda dibedda ku xiran.
Kadib, waan hagaajiyay bareegyada waxaanan isku dayay Magura RT6 biriiga hareeraha hareeraha. Marka runta loo hadlo, waxay ahayd mid dhib badan, oo dhib bay ahayd in la rakibo oo la rakibo.
Waxaan ka sameeyay isjiidka xajinta mootada wadada ka baxsan oo waxaan dul saaray bareega iskudhafka 'Formula RR clone disc' oo leh Di2 wareejinta. Si fiican ayey u shaqeysay, laakiin waqtigaan, qiimaha SRAM HydroR hareeraha biriiga iyo levers on Planet-X wuxuu ahaa doqonimo hoose.
Ka dib markaan darsay sida ay qaybaha SRAM iskula jaanqaadaan oo ogaadaan booska looga baahan yahay Di2 module-ka, waxaan ku iibsaday Biriig HydroR rim ah £ 100. Goor dambe, waxaan iibsaday afar nooc oo dheeri ah aniga, lammaane iyo qof jooga Mareykanka.
Waagii hore, sidoo kale waxaan u sameeyay giraangiraha iyo Gravity Research Pipe Dream-style B bareegyada mootooyinkeyga waddada ka baxsan, ka dibna baaskiillo kale ayaan u sameeyay.
Sidaa darteed, fikraddeenu waa: bareegyada qalabka korontada ku shaqeeya waxay leeyihiin taabasho hodan ah iyo ka faa'iideysi yar. Maguras waa mid xanuun badan oo laga xishoodo, sidaa darteed haddii aan doonayo inaan ku qalabeeyo baaskiil waddo leh bareegyada hareeraha, waxaan dooran karaa SRAM, laakiin waxaan jeclahay Di2.
Sidee ayey u adag tahay in la isku daro labada? Ka dib markaad ka saartid habka isbeddelka xawaaraha, waxaa jira dalool weyn oo ku yaal jirka ukunta SRAM, markaa jawaabtu waa: waa mid aad u fudud.
Waxaan iibsaday xoogaa gacan labaad oo ah 6770 Di2 qalabka wax lagu dhejiyo. Sababtoo ah 11-ka xawaare ee Ultegra 6870 Di2 waa shey cusub, dad badan ayaa si qalad ah u iibiyey wiishka qalabka loo yaqaan '6770 lever lever' si kor loogu qaado [qaladka maxaa yeelay 6770 runti waa loo isticmaali karaa 6870 derailleur]. Waxaan u maleynayaa inaan ku iibsaday labo kabood oo ku saabsan £ 50.
Dejintaydu waxay isticmaashaa daloolka udub-dhexaadka ah ee kala-baxa kala-baxa Di2, oo waxay ku riixdaa biraha iyo balaastigga noocyada dhaqsaha badan (3D daabacan) ee faashadkii asalka ahaa ee 'Di2 lever' ee lagu xiray birta mashiinka jejebiyey, sidaas darteed awoodda qaab-dhismeedku sidaa uma badnaan doonto. hal su'aal.
Waxaan ka jaray qaybta dheeraadka ah dusha sare ee gacanka 6770 Di2, waxaan ku farsameeyay si farsamo ahaan ah, ka dibna waxaan ugu dhejiyay qeybta naylonka ah ee si dhakhso leh u sameysmaya.
Waxaan badalay godkii si aan u sameeyo godka mid siman oo cabirkiisa saxda ah. Iyada oo rinji yar leh, ama Shimano cawl-cagaar cagaaran oo kiiskan ah, waxaan diyaar u ahay inaan isku soo uruuriyo wax walba.
Nidaamkani ma adeegsanayo guga soo noqoshada guga ama E-clip-ka si loo hagaajiyo usheeda dhexe, sidaa darteed wiishku waa la qodaa oo la taabtaa si loo helo qashin-celin miisaanka leh oo madaxeedu ka weyn yahay tiirarka udubdhexaadka ah. Marka jirka kabaalka uu sidoo kale xoogaa hoos u dego, madaxa waa la dhaqaa.
Guga soo noqoshada macmalka ah ayaa lagu darayaa birta birta mashiinka silsiladda si ay u siiso xoog soo celinta kabaalka.
Intaa ka dib, wax ka beddelka kaliya ee aan sameeyay wuxuu ahaa inaan kudarto qeyb yar oo O-giraan ah oo kuyaala godkii hore ee E-clamp ee pinka udubdhexaadka ahaa si looga hortago in baalasha birta fiiqan ay waxoogaa ruxmaan.
Fiilada Di2 waxay ku fidsan tahay jeexdin dhinaca hoose ee 3D madaxa balaastigga daabacan ee birta bareegga, sidaas darteed waa ay go'an tahay mana ku dhegi doono ama ma xiran doono.
Ka dib markaad ka saartid dhammaan farsamooyinka wareejinta, sida kaliya ee wax looga beddelayo qaybaha SRAM waa in la xareeyo jeexjeexyada si loo dhigo fiilada Di2. Qalabka Di2 waxaa lagu hagaajiyaa gabal xumbo ah booska gadaashiisa.
Waxaan sidoo kale orday nidaam kala-wareejin dillaac ah, oo isku xiraya duuggii hore ee Dura-Ace 7970 Di2 oo ka yimid SW-R600 oo ku biiraya beddelka qaybta elektaroonigga ah, dhammaan furayaashana waxay ku xirnaayeen usha bidix. Xadhigga ayaa loo dheereeyay si uu u helo xal fur-furan oo nadiif ah, markii aan ordayna marinka Canyon ee isku-xidhka kabaalka isku dhejisan, sanduuqa 'Junction'A'Di2' ee ku yaal wiishka ayaa ku jiray.
Bareegyadu waxay leeyihiin xirmooyinka titanium iyo bareesada suunka bareega. Waxay ku rakiban yihiin qaab 52 cm ah. Wadarta culeyska giraangiraha hore waa 375g, wadarta culeyska giraangiraha gadaal waa 390g, wadarta miisaanka giraangiraha gadaalna waa 390g.
Haa, waxaan rabaa inaan iraahdo waxay ahayd guul. Waxaan ka iibiyay set qof ka mid ah Hong Kong, oo waliba ii soo raray SRAM Red iyo Dura-Ace si ay u sameeyaan mashupkan.
Waxaan ka iibiyey qof kale oo qalab ah qof Australiyaanka ah si uu ugu isticmaalo baaskiilkiisa TT, saddex meelood meelna waxaan ka iibiyey qof jooga Maraykanka, si aan u bixiyo dhammaan kharashyadayda.
Haddii aan bixiyo qiimaha buuxa ee waxaas oo dhan, waxay noqon doontaa khatar weyn. Intaa waxaa sii dheer, marwalba waan ku soo celin karaa qaybaha SRAM si aan ugu keydiyo farsamooyinka isbeddelka farsamada iyada oo aan wax dhibaato ah jirin.
Waxaa laga yaabaa inaan kabaalka siiyo guga soo laabashada oo xoog badan. Waxaan ubaahanahay xiritaanka dunta si aan u joojiyo isbadalka safarka inta lagu jiro wadista, maxaa yeelay waxaan gebi ahaanba furey bajaajta biriijka oo waan xiiray qufulka asalka ah ee asalka ah.
Haa, waxaan horumarinayaa xoogaa fuulid dhagaxan cusub iyo kabayaal ruug, iyo waxaan raadinayaa habeyn kale taas oo kabaalka garka hore uu noqon doono kabaal caawiye, sida suulasha suulasha galka Campagnolo.
Fikradda asalka ahi waxay ahayd midigta bidix iyo bidix hoos udhac, aniguna waxaan wali iskudayayaa inaan isticmaalo nooca kabaalka.
Waan ku dhegi karaa baalayaasha kabayare ee faraska ee SRAM ama isticmaali karaa Campagnolo, ka dibna waxaan haysan karaa baalayaasha shaashadda ee SRAM ee sanduuqa gadaal u jeexjeexa iyo levers cusub ee sanduuqa hore ee derailleur.
Tani waa inay micnaheedu tahay inaysan jirin wax khaldan xitaa marka la xiro galoofisyo, taas oo laga yaabo inay dhibaato noqoto xilliga qaboobaha iyadoo la raacayo heerarka caadiga ah ee Shimano.
Aad baad ugu mahadsantahay Bawlos sida aad uga jawaabtay su'aashayda oo aad u siisay sawirro. Faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan isaga, fadlan isaga raac Flickr iyo Instagram, ama ka aqri qoraaladiisa hoostiisa magaca motorapido ee Weight Weenies forum.
Matthew Allen (oo horay loo oran jiray Allen) waa nin khibrad badan u leh makaanikada, khabiirna ku ah tikniyoolajiyadda baaskiilka. Wuxuu qadarinayaa naqshad wax ku ool ah oo xariif ah. Asal ahaan Louis, wuxuu jeclaa baaskiilada iyo qalab kasta oo xariiqa. Muddo sanado ah, wuxuu tijaabiyay alaabooyin kala duwan oo loogu talagalay BikeRadar, Baaskiil Baabuur, IWM Muddo dheer, qalbiga Matthew waxaa iska lahaa Scott Addict, laakiin wuxuu hadda ku raaxeysanayaa Specialized's khabiir sare ee Roubaix Khabiir wuxuuna xiriir dhow la leeyahay Giant Trance e-MTB. Dhererkiisu waa 174 cm, miisaankiisuna waa 53 kg. Waxay u muuqataa inuu ka fiicnaan lahaa kaxeynta baaskiil, wuuna qancay.
Markaad geliso faahfaahintaada, waxaad ogolaatay shuruudaha iyo shuruudaha iyo siyaasadda asturnaanta ee BikeRadar. Waad ka bixi kartaa wakhti kasta.